XOG:- Wafdi uu hoggaaminayo madaxweyne Farmaajo oo ku wajahan magaalada Kismaayo – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Wafdi uu hoggaaminayo madaxweyne Farmaajo oo ku wajahan magaalada Kismaayo
Wafdi uu hoggaaminaayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Maxamed Farmaajo ayaa lagu wadaa in todobaadkaan gudigiisa ay gaaraan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka J/hoose.
Wafdiga madaxweynaha ayaa waxaa ku jiri doonna wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, iyadoo ammaanka guud ee magaalada Kismaayo si weyn loo adkeeyay.
Warar soo baxaya waxay sheegayaan in ciidamada maamulka Jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ay xireen guud ahaan waddooyinka magaalada Kismaayo.
Madaxweyne Farmaajo ayaa markii uu tago magaalada Kismaayo, wuxuu halkaasi kula hadli doonnaa shacabka ku dhaqan magaaladaasi, wuxuuna sidoo kale la kulmi doonnaa madaxda maamulka Jubbaland.
Arrimaha ugu weyn ee safarka madaxweyne Farmaajo uu ku tagaayo magaalada Kismaayo ayaa ah dhiiro-gelinta ciidamada maamulka Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed oo la filaayo inay dhawaan qaadaan howlgal ka dhan ah Al-shabaab.
Habeen hore ayay aheyd markii diyaarado aanan la garanayn meesha laga leeyahay balse loo maleeynayo inay yihiin kuwa Mareykanka ah ay waraaqo digniin ah ku daadiyeen magaalooyinka Jilib iyo Jamaame oo ka kala tirsan gobolada J/dhexe iyo J/hoose.
Waraaqahaasi ayaa waxaa ku qornaa digniin loo jeedinaayo xubnaha ka tirsan Al-shabaab inay ka faa’iideystaan cafiskii 60-ka maalmood uu madaxweynaha Soomaaliya u fidiyay xubnahaas, si ay dib ula midoobaan qoysaskooda.